AUTOTRADE GOLD - ATG - गोल्ड ट्रेडिंग रोबोट - XAU/USD
ट्रेडिंग रोबोट ▼
ट्रेडिंग रोबोट सुन मार्केट (xauusd) लाई समर्पित।
ट्रेडिंग रोबोट cryptocurrency बजारमा समर्पित।
तेल बजारमा समर्पित ट्रेडिंग रोबोट।
ट्रेडिंग रोबोट विदेशी मुद्रा बजारमा समर्पित छ।
प्रतिलिपि व्यापार विशेषज्ञ
कमोडिटीमा आधारित व्यापारिक रोबोट।
क्रिप्टो लगानी ▼
बिग डाटा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नुहोस्।
आफ्नो crytos संग सुन र हीरा मा लगानी गर्नुहोस्।
Ethereum blockchain को साथ घर जग्गामा लगानी गर्नुहोस्।
खरीद गर्नुहोस्, भण्डार गर्नुहोस् र २ 250० भन्दा बढि क्रिप्टो मुद्राहरू सुरक्षित गर्नुहोस्
ब्लॉकचेन र क्रिप्टो
Block भिडियो ट्यूटोरियलहरू, ब्लकचेनबाट क्रिप्टोकरन्सीहरू
प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीको बारेमा आवश्यक ज्ञान
आधिकारिक वेबसाइट PantheraTrade
एटीजी प्रणाली (Gold)
atg-system.com मा जडान गर्नुहोस्
ATC बोट (क्रिप्टो)
atcbot.io मा जडान गर्नुहोस्
MetaCapital मा लग इन गर्नुहोस्
Equiti मा जडान गर्नुहोस्
गोल्ड ट्रेडिंग रोबोट
AutoTrade Gold .० हो ट्रेडिंग रोबोट सुन बजारमा आधारित इन्डोनेसियाली स्वचालित। ATG उपनाम पनि, Goldओरेकल, स्व Gold वा EA रोबोट Gold यसको प्रयोगकर्ताहरूद्वारा, यसले तपाईंको पूँजीको ०.५ र १.५% बीचको दैनिक लाभको लक्ष्य राख्छ। तपाइँ प्रति दिन 0,5% भन्दा बढी गुमाउन सक्नुहुन्न। यो रोबोट स्क्याल्पिङ मोडमा ट्रेड गर्छ र एक पटकमा एउटा पोजिसन मात्र खोल्छ। पूर्ण रूपमा सुरक्षित, यदि ATG 1,5 ले घाटा रेकर्ड गर्छ भने, यसले दोस्रो व्यापारको साथ दिनको समयमा आफ्नो लाभहरू पूरा गर्न प्रयास गर्नेछ। पनि पत्ता लगाउनुहोस् AutoTrade क्रिप्टो, Bitcoin मा 7/7 दिन लाभ गर्दै नयाँ व्यापारिक रोबोट।
मा दर्ता गर्नुहोस् AutoTrade Gold अपडेट गरिएको ट्यूटोरियल
📀 EA ATG5डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ broker.
अटो ट्रेड मा लाइसेन्स १ मूल्य Gold
सिफारिस गरिएको न्यूनतम समग्र लगानी
अपेक्षित मासिक लाभ
रोबोटको फाइदा AutoTrade Gold
मा आफ्नो आफ्नै कोष व्यवस्थापन र नियन्त्रण broker LegoMarket LCC एप प्रयोग गर्दै MetaTrader4ou avec Le broker आफ्नो रोजाइको Pansaka वेबसाइटबाट रोबोट खरिद गरी डाउनलोड गरेर (तलको ट्युटोरियलको चरण २)। केवल तपाईंसँग आफ्नो लगानीमा पहुँच छ: प्रारम्भिक कोष + आय उत्पन्न + चक्रवृद्धि ब्याज।
स्थापना गर्न कुनै सफ्टवेयर छैन। कुनै व्यापार कौशल आवश्यक छैन।
व्यापार समाधान द्वारा विकसित पान्साकासुन बजारमा केन्द्रित छ।
दक्षता ± १०%
मासिक रिटर्नमा १ 15% को औसत निष्क्रिय आय।
वास्तविक बजार अवस्थामा2वर्ष भन्दा बढी।
Start 250 को न्यूनतम पूंजी संग अनुभव सुरु गर्नुहोस्।
तपाईंको आवेदनमा पारदर्शी परिणामहरू MetaTrader 4.
15% कमाई / महिना संग AutoTrade Gold
अटो ट्रेड संग Gold 5.0
🚧 ध्यान दिनुहोस्, साइटको मर्मतसम्भार नभएसम्म YouTube मा कुनै पनि भिडियो व्यवहार्य छैन Pantheratrade अझै ठाउँमा छ। तल लेखिएको ट्यूटोरियल निरन्तर अपडेट हुनेछ।
एक क्रिप्टो खाता छ
प्लेटफर्मले तपाइँलाई तपाइँको क्रिप्टोकरन्सीहरू किन्न र बेच्न अनुमति दिन्छ तर तपाइँको रोबोट र फिड गर्न पनि broker LegoMarket।
मा दर्ता गर्नुहोस् PantheraTrade
एपीआई प्लेटफर्म ATG लाई लिङ्क गर्दै broker LegoMarket।
Pansaka मा आफ्नो लाइसेन्स किन्नुहोस्
जडान प्लेटफर्मले तपाईंको आजीवन लाइसेन्स खरिद गर्न अनुमति दिन्छ।
फोटो गैलरी Autotrade Gold Instagram मा
मिश्रित ब्याज समावेश नगरी ATG 5.0.० मुनाफाको गणना
तलको तालिका एक उदाहरणको रूपमा लिनुपर्नेछ र वास्तविक वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुहुन्न। यसले तपाईंको पूंजीको विकासलाई संकेत गर्दछ जम्मा गरिएको रकम अनुसारaमा आधारित प्रति महिना १%% को बृद्धि। यस गणनामा दैनिक चक्रवृद्धि ब्याजलाई ध्यानमा राखिएको छैन। यदि तपाईंले प्रत्येक महिना आफ्नो आम्दानी फिर्ता लिनुभयो भने, तपाईंले केही पनि फिर्ता गर्नुभएन भने6महिनाको तुलनामा तपाईंको प्रारम्भिक लगानी फिर्ता गर्न लगभग4महिना लाग्नेछ।
+ १,300.000,००० लगानीकर्ता TGA परिणाम 5
निक्षेप: €०० €
+ लाइसेन्स १ ($ १2)
+ लाइसेन्स १ ($ १3)
⚠️ कुनै पनि लगानीकर्ताको लागि महत्त्वपूर्ण रिमाइन्डर र सल्लाह
याद गर्नुहोस् कि यो एक जोखिमपूर्ण लगानी हो, कि तपाइँ पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँलाई बाँच्न आवश्यक छैन र तपाइँको प्राथमिक लक्ष्य तपाइँको योजना अनुसार तपाइँको प्रारम्भिक पूँजीलाई सकेसम्म छिटो पुन: प्राप्ति गर्नु हो।
उदाहरण रणनीति : म $ 10.000 मा लगानी गर्छु AutoTrade Gold। फिर्ता नगरी र5महिनामा, मैले मेरो पुँजी दोब्बर गर्नुपर्छ। मैले $ 22.000 को योगफलमा पुग्ने बित्तिकै, म प्रत्येक पटक रोबोटले केहि हप्ता भित्रमा $ 2000 फिर्ता लिन सुरु गर्छु। त्यसैले म तिनीहरूमा पुग्दा प्रत्येक पटक $ 22.000 देखि $ 20.000 फिर्ता लिन्छु। यसरी मैले आफ्नो प्रारम्भिक पुँजी ९ महिनाभन्दा कममा फेला पारेको छु र प्रत्येक महिना $३,००० (२०,००० x १५%) को निष्क्रिय आय उत्पन्न गर्छु। Autotrade Gold.
तपाईंको ट्रेडिंग क्षमताको आधारमा lic लाइसेन्सहरू उपलब्ध छन्
इजाजतपत्रहरू अपग्रेड गर्न सकिन्छ, अर्थात् तपाईंले हालको इजाजतपत्र र इच्छित इजाजतपत्र बीचको भिन्नता मात्र तिर्नु हुनेछ। रोबोटले $ 100 को पूंजी अन्तर्गत व्यापार गर्दैन। यदि तपाइँ फिर्ता लिनुभयो र तपाइँको ट्रेडिंग खातामा $ 50 थ्रेसहोल्ड मा जानुभयो भने, तपाइँ तपाइँको इजाजतपत्र गुमाउनुहुनेछ।
उदाहरणका : इजाजतपत्र2$ 5000 (जमा पुँजी + दैनिक आय) मा सीमित छ। यसको मतलब यो हो कि यो इजाजतपत्रको साथ, एक पटक तपाईंले आफ्नो पूँजी जम्मा गर्नुभयो, उदाहरणका लागि $3000 र आम्दानीमा $2000 बनाउनुभयो, तपाईं अधिकृत अधिकतम $5000 मा पुग्नुहुनेछ। त्यहाँबाट, तपाईंको रोबोटले व्यापार बन्द गर्नेछ। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो कमाइको केही अंश फिर्ता गर्नुपर्नेछ वा उच्च इजाजतपत्र लिनुपर्छ। तपाईंको रोबोट बन्द हुनु अघि अपग्रेड गर्न सम्झनुहोस्, अन्यथा तपाईंले प्राविधिक समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ वा साइटमा रोबोटको जडान म्यानुअल रूपमा पुन: सुरु गर्नुपर्नेछ। ATG प्रणाली। यस उद्देश्यका लागि एक बटन प्रदान गरिएको छ।
१०० र बीचको कुल पूँजीको लागि 500 $.
लाइसेन्स १ किन्नुहोस्
१०० र बीचको कुल पूँजीको लागि 5.000 $.
१०० र बीचको कुल पूँजीको लागि 30.000 $.
१०० र बीचको कुल पूँजीको लागि 1.000.000 $.
न्यूनतम पूंजीको लागि 1.000.000 $.
ATG5प्राविधिक समर्थन
बारे बारम्बार प्रश्नहरू Autotrade Gold 5.0
ट्रेडिंग बोटको बारेमा केही थप जानकारी
मसँग प्रश्नहरू छन् AutoTrade Gold, Pantheratrade, Pansaka वा ATG प्रणाली
यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने AutoTrade Gold 5.0, म तपाईंलाई आफ्नो प्रत्यक्ष प्रायोजकको नजिक जान सल्लाह दिन्छु। बाट प्राविधिक सहयोग PantheraTrade 70 कर्मचारीहरु मिलेर बनेको छ। तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न, तपाईंले टिकट खोल्नु पर्छ र आफ्नो अनुरोधलाई अङ्ग्रेजीमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न र राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा संलग्न संलग्न गर्न आवश्यक छ। समस्याको अवस्थामा मात्र तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, अन्यथा आफ्नो प्रायोजकलाई कल गर्नुहोस्। इजाजतपत्र समस्याहरूको लागि, Pansaka समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईंको रोबोटमा जडान गर्न समस्याहरूको लागि, साइटलाई प्राथमिकता दिनुहोस् ATG प्रणाली.
प्राविधिक समर्थनको लागि टिकट खोल्नुहोस् समाचार पछ्याउन टेलिग्राममा RDV
केहि चिन्ताहरु संग Autotrade Gold 5.0?
बाट प्राविधिक समर्थन Panthera प्रायोजकको रूपमा हामीलाई सोध्नुहोस् कि तपाईले सामना गर्न सक्ने समस्याहरूको मद्दत गर्नका लागि तर यो अत्यावश्यक छ कि तपाईले अनुरोध गर्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा टिकट खोलेर: https://panthera.support
चरण 1 / PantheraTrade
रोबोटमा दर्ता गर्नका लागि पछ्याउने चरणहरू Autotrade Gold 5
म ए को प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु याहू वा जीमेल ठेगाना जब तपाइँ दर्ता गर्नुहुन्छ। केहीलाई Hotmail, Live, Wanadoo, Laposte ठेगानाहरू सहित इमेल मार्फत पुष्टि गर्न समस्या भएको छ...
मा दर्ता गर्नुहोस् AutoTrade Gold 5.0
5 आवश्यक क्षेत्रहरू भर्नुहोस्:
1 - आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम सिर्जना गर्नुहोस्
२ - आफ्नो पहिलो नाम र अन्तिम नाम लेख्नुहोस्
3 - आफ्नो निवास को देश चयन गर्नुहोस्
4 - आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्
5 - आफ्नो इमेल प्रविष्ट गर्नुहोस् (प्राथमिकता Gmail)
सेवाका सर्तहरू स्वीकार गर्नुहोस्, त्यसपछि पेश गर्नुहोस्
📨 Autotrade ले भर्खरै तपाईको पासवर्ड इमेल गरेको छ। यसलाई पछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंले5मिनेट भित्र प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले लगइन पृष्ठबाट पासवर्ड बिर्सन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
✅ यदि तपाईंसँग क्रिप्टोकुरेन्सी खाता छैन भने, म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु, अहिले, मा एक खाता बनाउन को लागी Binance, Coinbase, Kraken... उदाहरणका लागि Crypto.com जस्ता २ घन्टाभन्दा बढी समयको लागि तपाईंको निकासी रोक्ने एक्सचेन्जहरू नदिनुहोस्। तपाईं क्रिप्टो किन्न सक्नुहुन्छ Binance आफ्नो क्रेडिट कार्ड संग। यद्यपि, तपाइँ तपाइँको बैंक द्वारा सीमित निकासी सीमा मा अडिनु हुनेछ। बैंक स्थानान्तरण गर्न र यसरी ठूलो रकम जम्मा गर्न, तपाईंले SEPA सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Binance.
मा दर्ता गर्नुहोस् Binance ट्युटोरियल Binance
यदि तपाइँको फोन नम्बर पहिले नै दर्ता गरिएको छ भने, तपाइँ फ्रान्समा बस्नुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई फिर्ता राख्न सक्नुहुन्छ र 06 लाई 336 ले बदल्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो मौकाको रूपमा कल साइन प्रयोग गर्नुहोस्।
स्टेज2/ Pansaka
मा दर्ता गर्नुहोस् पान्साका आफ्नो ATG5लाइसेन्स प्राप्त गर्न
Pansaka Autotrade व्यापारिक उत्पादनहरु को सबै लाइसेन्स ह्यान्डल गर्ने कम्पनी हो। तपाईसँग हुनुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्USDT वा Litecoin LTC तपाईंको एक्सचेन्जमा तपाईंको इजाजतपत्र खरीद गर्न।
Pansaka मा दर्ता गर्नुहोस्
रेफरल नम्बर: 10110618
पहिलो नाम + अन्तिम नाम
अप-टु-डेट पहिचान कार्ड वा पासपोर्ट नम्बर
पासवर्ड + पुष्टिकरण
क्रिप्टो खाता फारम भर्नुहोस्:
- छान्नुहोस् USDT
क्रिप्टो ठेगाना: आफ्नो जम्मा ठेगाना संकेत गर्नुहोस् USDT
(Ethereum ERC 20 नेटवर्क) मात्र
स्टेज3/ Pansaka
कसरी किन्ने वा तपाइँको लाइसेन्स अपग्रेड गर्ने ओटोGold 5.0?
Pansaka कम्पनी को मुखपृष्ठ मा, ट्याब मा क्लिक गर्नुहोस् विशेष कार्यक्रम> भविष्य प्याकेज किन्नुहोस् र तपाईले जम्मा गर्न चाहनु भएको व्यापारको रकम अनुसार इजाजतपत्र छान्नुहोस्।
💡 म तपाईंलाई रोबोटको ट्रेडहरू र निष्क्रिय आय उत्पन्न गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्नको लागि लाइसेन्स 1 र $ 110 जम्मा गरेर सुरु गर्न सल्लाह दिन्छु। त्यसपछि तपाइँ तपाइँको इजाजतपत्रहरू प्रत्येक बीचको भिन्नता तिरेर अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले Litecoin (LTC) खरीद गरेर सुरु गर्नुहोस् Binance को एक रकम संग क्रेडिट कार्ड द्वारा 250 €.
तपाईंको इजाजतपत्रको लागि भुक्तान गर्न र तपाईंको रकम जम्मा गर्नको लागि broker, हामी यसको सजिलो, गति र कम लेनदेन शुल्कको लागि Litecoin (LTC) मार्फत खरिद र भुक्तानी गर्न सिफारिस गर्छौं।
CoinPayment प्रयोग गरेर तपाईंको इजाजतपत्र सक्रिय हुन एक घण्टा लाग्छ।
स्टेज4/ Pansaka
जाँच र तपाइँको लाइसेन्स को लागी भुक्तानी
यस उदाहरणमा, मैले ATG रोबोटको इजाजतपत्र २ छनोट गरेको छु broker LegoMarket।
बटन १: क्रिप्टोकरन्सीमा भुक्तानी छनौट गर्न यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा पपअप खुल्नेछ, क्रिप्टो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि मान्य गर्नुहोस्।
बटन २: भ्यालीडेट र इनभ्वाइसिङ पहुँच गर्नुहोस्
स्टेज5/ Pansaka
तपाइँको लाइसेन्स बिलि
डलरमा मूल्य र लागतको सारांश।
त्यसपछि Coinpayment बटन मा क्लिक गर्नुहोस्।
चरण / / Coinpayment
तपाईंको लाइसेन्सको भुक्तानी Autotrade Gold Litecoin (LTC) मा, CoinPayment संग।
बायाँमा तपाईंको बिलिङ जानकारी भर्नुहोस्, अर्थात् तपाईंको पहिलो नाम, थर र इमेल ठेगाना (तपाईँको इमेल ठेगानामा कुनै त्रुटि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्)। दायाँमा, cryptocurrency छान्नुहोस् Litecoin (LTC) यसको कम लेनदेन लागत को लागी।
अन्तमा, बायाँ मा नीलो बटन मा क्लिक गर्नुहोस्, ईमेल अन्तर्गत, फारम मान्य गर्न। लेनदेन पूरा गर्न CoinPayment मा दर्ता गर्न बिल्कुल आवश्यक छैन।
एउटा नयाँ CoinPayment पृष्ठ खुल्नेछ र तपाईंलाई देखाउनेछ रकम साथैLTC ठेगाना जहाँ तपाइँ तपाइँको Litecoin (LTC) पहिले नै तपाइँको विनिमय मा किनेको स्थानान्तरण गर्न को लागी हुनेछ (Binance, Coinbase, आदि)।
मा Binance, यहाँ को लागी लिङ्क छ बैंक कार्डबाट Litecoin किन्नुहोस्.
तपाईंको इजाजतपत्रको लागि भुक्तानीको अन्तिमकरण Autotrade Gold.
आफ्नो विनिमय मा जानुहोस् जस्तै Binanceमा ठ्याक्कै फिर्ता लिनुहोस्LTC ठेगाना अनुरोध गरियो। अनुरोध गरिएको रकममा 0,001 LTC थप्न नबिर्सनुहोस् अन्यथा लेनदेन अस्वीकार गरिनेछ र तपाईंलाई CoinPaiment मार्फत प्रतिपूर्ति गरिनेछ। एक शुल्क बदलामा Coinpayment द्वारा लागू गरिनेछ।
प्राप्तकर्ता को LTC ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो ठेगाना (स्ट्रिंग) Coinpayment लाई पठाइएको छ।
नेटवर्क प्रयोग गरेर स्थानान्तरण गरिनु पर्छ LTC.
थपेर LTC रकम संकेत गर्नुहोस् ०.००१ अन्तिम मूल्यमा
त्यसो भए फारम मान्य गर्नुहोस्।
तपाईंले पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ Binance र CoinPayment ले तपाईलाई स्थानान्तरण सफल भएको बताएको छ। यदि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भने, नडराउनुहोस्! तपाईंले लेनदेन शुल्क विरुद्ध CoinPaiment मार्फत केही मिनेटमा रकम फिर्ता गर्न इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफ्नो स्प्याम जाँच गर्नुहोस्। आफ्नो उल्लेख गर्नुपर्छ LTC जम्मा ठेगाना.
चरण 8 / Pantheratrade
को उद्घाटन क MT4 खाता मा व्यापार Pantheratrade.
कम्पनी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न ट्रेडिंग रोबोटहरू प्रयोग गर्नको लागि PantheraTrade, तपाईंले एक खोल्न आवश्यक छ मानक MT4 खाता। यसले तपाईंलाई उपलब्ध गराइएका सबै उत्पादनहरूलाई केन्द्रीकृत गर्नेछ।
यो गर्नको लागि, लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् नियमित खाताहरू > MT4 खाता। त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् MT4 खाता उत्पन्न गर्नुहोस्
चरण9/ Pantheratrade
आफ्नो परिवर्तन गर्नुहोस् अस्थायी पासवर्ड ईमेल द्वारा प्राप्त।
तपाईंले भर्खरै इमेल मार्फत आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र अस्थायी पासवर्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईको प्रयोगकर्ता नाम तपाईको लगइन लगइन हो।
हामी अब तपाईंको अस्थायी पासवर्ड परिवर्तन गर्नेछौं।
यो गर्नको लागि, स्क्रिनको तल बाँयामा लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्: लगइन पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्। पहिलो फिल्डमा इमेलद्वारा प्राप्त भएको आफ्नो अस्थायी पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि तलका दुईवटा क्षेत्रमा नयाँ लगइन पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
चरण 10 / Pantheratrade
तपाईँका खाता बनाउनुहोस् Autotrade Gold.
पहिले, लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् प्रतिलिपि ट्रेड खाताहरू > MT4 खाता। माथिल्लो दायाँमा रहेको निलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्: नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस्
छनौट अटो ट्रेडGold श्रेणी चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् MT4 खाता उत्पन्न गर्नुहोस्.
एउटा तालिका नयाँ पृष्ठमा देखा पर्दछ। आफ्नो MT4 लगइन खाता र आफ्नो MT4 लगानीकर्ताको पासवर्ड सुरक्षित राख्नुहोस्। तिनीहरू पनि तपाईंलाई इमेल मार्फत पठाइनेछ। यी कोडहरूले तपाईंलाई ट्रेडहरू साथै तपाईंको दिन-प्रतिदिन खाताहरू पछ्याउन अनुमति दिनेछ।
चरण 11 / Pantheratrade
आफ्नो प्रदान गर्नुहोस् KYC आफ्नो खाता प्रमाणित गर्न।
आफ्नो खाता प्रमाणीकरण गर्नको लागि, तपाईंले अनुरोध गरिएको पहिचानको तीन टुक्राहरू (राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा ड्राइभिङ इजाजतपत्र) मध्ये एक प्रदान गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस्, तपाईंको पहिचान कागजातको म्याद समाप्त हुनु हुँदैन अन्यथा तपाईंको KYC स्वतः अस्वीकार गरिनेछ।
तपाईले चाहानु भएको आईडीको प्रकार छान्नुहोस् त्यसपछि तपाईको स्मार्टफोनको साथ फोटो खिच्नुहोस्।
फिल्डमा तपाईको मनपर्ने आईडीको नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्: आईडी नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्।
आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुहोस् (वैध विस्तार: jpg, jpeg वा png)। 1 Mo को वजन भन्दा बढि नगर्नुहोस्। पठाउनु अघि आफ्नो फोटो अनुकूलन गर्न को लागी, साइट प्रयोग गर्नुहोस् tinypng.com.
पृष्ठमा Update KYC, तपाईंले आफ्नो स्थिति "पेन्डिङ" मोडमा देख्नुपर्छ। टोलीलाई समय दिनुहोस् Pantheratrade आफ्नो पहिचान कागजात प्रमाणित गर्न।
चरण 12 / Pantheratrade
आफ्नो तिर्नुहोस् भौचर आफ्नो जम्मा ठेगाना मान्य गर्न।
प्रोफाइल भाउचर भनेको रोबोटको जीत प्राप्त गर्नको लागि तपाईंको जम्मा ठेगानाको दर्ता हो। यो ठेगाना BTC, ETH वा हुन सक्छ USDT erc20 / trc20। हामी सिफारिस गर्छौंUSDT trc20 (trx) यसको कम लेनदेन लागत र स्थिरता को लागी।
लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् प्रोफाइल भाउचरहरू त्यसो भए बटनमा नयाँ भाउचर खरिद गर्नुहोस्
क्रिप्टो चयन गर्नुहोस्: ETH, BTC, USDT TRC20 वा USDT ERC20, त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नुहोस्
पृष्ठको फेदमा, म्यानुअल चेकआउट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईंलाई भुक्तान गर्नको लागि Coinpayments मा रिडिरेक्ट गरिनेछ।
चरण 13 / Pantheratrade
Mise à jour Update प्रोफाइल.
प्रोफाइल भाउचरको लागि भुक्तान गरिएको छ र तपाईंको भाउचर कोड तालिका, स्तम्भमा देखा पर्दछ भौचर। तपाईंको KYC स्वीकृत हुँदैछ। हामी अब प्रोफाइल भर्न समाप्त हुनेछ।
पहिले, आफ्नो ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् USDT trc20 र/वा erc20 त्यसपछि मान्य गर्नुहोस्।
तपाईंले इमेल मार्फत OTP कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो कोड पहिलो फिल्डमा सम्मिलित हुनुपर्छ।
दोस्रो फिल्डमा, तपाईंले पृष्ठमा फेला पार्नुहुने भौचर कोड राख्नुहोस् प्रोफाइल भाउचर, भाउचर स्तम्भ। त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नुहोस्।
चरण 14 / PantheraTrade
कसरी तपाइँको ट्रेडिंग पूंजी जम्मा गर्ने PantheraTrade ? (१/1)
लाइसेन्स भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
हामी साइटमा फर्कन्छौं PantheraTrade संग ट्रेडिंग पूंजी जम्मा गर्न क्रममा broker लेगो मार्केट LCC।
क्लिक गर्नुहोस् प्रतिलिपि ट्रेड खाताहरू > MT4 जम्मा
त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् MT4 नयाँ निक्षेप
सामान्यतया यो तपाइँको पहिलो जम्मा छ PantheraTrade, तर यदि पछि तपाईं आफ्नो पूंजी बढाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यस चरणमा फिर्ता आउनुपर्नेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि निक्षेप रकम पनि तपाईंको लाइसेन्सको छनौटमा निर्भर गर्दछ।
राशि US $: राशि तपाइँ डलर मा जम्मा गर्न चाहानुहुन्छ संकेत गर्नुहोस्
खाता चयन गर्नुहोस्: तपाईंको ATG खाता नम्बर Gold
प्रयोग को शर्तहरु लाई समर्पित बक्स जाँच गर्नुहोस्, त्यसपछि यो फारम सबमिट गर्नुहोस्
स्टेज? / PantheraTrade
संग तपाईंको पूंजी जम्मा गर्नुहोस् सिक्का भुक्तानी। (१/2)
तपाईंको बिलि information जानकारी भर्नुहोस्, अर्थात् तपाईंको पहिलो नाम, अन्तिम नाम र ईमेल ठेगाना।
Litecoin (LTC) छनौट गर्नुहोस्।
अन्त्यमा, देब्रेपट्टि निलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
CoinPayment मा एउटा नयाँ पृष्ठ खुल्नेछ जसले तपाईंलाई रकम र ठेगाना प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईंले आफ्नो Litecoins LTC जम्मा गर्नुपर्छ।
Note कृपया ध्यान दिनुहोस्, यो एक नयाँ जम्मा ठेगाना हुनेछ। यो तपाइँको लाइसेन्स को रूप मा उही जम्मा ठेगाना हुनेछैन।
संग तपाईंको ट्रेडिंग पूंजी जम्मा गर्नुहोस् PantheraTrade। (१/3)
इजाजतपत्र खरीदको लागि उस्तै हेरफेर। संग Binanceअनुरोध गरिएको LTC रकममा ०.००१ थपेर सही भुक्तानी गर्नुहोस्: https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
प्राप्तकर्ताको LTC ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्, Coinpayment मा उल्लेख गरिएको एक।
LTC रकम संकेत गर्नुहोस्, त्यसपछि जोड्नुहोस् ०.००१ अन्तिम मूल्यमा.
Minutes केहि दसौं मिनेट प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तपाईंले पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ Binance र CoinPayment तपाइँलाई यो बताउन को लागी हस्तान्तरण सही तरीकाले गरिएको थियो।
जब सम्म अटो ट्रेड को प्राविधिक सहयोग Gold लेनदेन प्रमाणित गरेन, तपाईंले आफ्नो MT4 एपमा आफ्नो रकम देख्नुहुने छैन।
चरण १३ / Pansaka / ATG- प्रणाली
एसोसिएट ATG प्रणाली र Pansaka
ATG प्रणालीमा जडान गर्नुहोस्
https://atgbot.co मा जडान गर्न, उही इमेल र पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस् Pantheratrade.
तपाइँको लाइसेन्स को लागी प्रणाली द्वारा खाता मा लिन को लागी धेरै मिनेट पर्खनुहोस्। यो प्रक्रिया तपाइँको पहिलो लाइसेन्स को खरीद को लागी साथै तपाइँको अर्को लाइसेन्स को अपग्रेड को लागी मान्य छ। Cala तपाइँ तपाइँको व्यापार खाता संग नयाँ इजाजतपत्र संग सम्बद्ध गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
तपाईं हुनेछ ईमेल प्राप्त गर्नुहोस् atgbot.co बाट (तपाईंको स्प्याम पनि जाँच गर्नुहोस्).
इमेलमा रहेको भाउचर कोड र भाउचर आईडी पुन: प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईंको कोडहरू प्रयोग गरेर ATG प्रणाली वेबसाइटमा जानुहोस् Pantheratrade र आफ्नो इजाजतपत्र सक्रिय गर्नुहोस्: https://atgbot.co/user/ea/activate
अनुरोध गरिएका क्षेत्रहरु मा तत्वहरु प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
राम्रो संग संकेत गर्नुहोस्: मसँग एक व्यापार खाता छ
तपाइँको छनौट गर्नुहोस् compte Gold
त्यसपछि यो फारम प्रमाणित गर्नुहोस्।
⚠️ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको इजाजतपत्र "जडान" छ। यदि आवश्यक भएमा "रिफ्रेस" बटनमा क्लिक गर्नुहोस् जब सम्म यो मामला हो। यदि नेटवर्क संतृप्त छ भने केहि घण्टा पछि प्रयास गर्नुहोस्, अन्यथा खोल्नुहोस् ATG प्रणाली प्राविधिक समर्थन टिकट तिनीहरूलाई तपाईंको ATG5रोबोट सक्रिय गर्नको लागि।
चरण 14 / MetaTrader 4
कसरी अनुप्रयोग मा आफ्नो आय ट्रयाक गर्न MetaTrader4?
MT4 एक नि:शुल्क मोबाइल अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई आफ्नो कमाइको विकासलाई पछ्याउन अनुमति दिन्छ। चाहे तपाईं एन्ड्रोइडमा हुनुहुन्छ वा IOS मा, तपाईंले यसलाई सजिलैसँग स्टोरहरूमा फेला पार्नुहुनेछ। लोगोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, तपाईलाई मेटाट्रेडरको संस्करण ४ चाहिन्छ।
एक पटक स्थापना भएपछि, हामी यसलाई तपाइँको ट्रेडिंग खातामा कन्फिगर गर्नेछौं। यो गर्नको लागि, तपाईंले एउटा इमेल प्राप्त गरेको हुनुपर्छ PantheraTrade important महत्त्वपूर्ण डाटाको साथ।
मास्टर पासवर्ड: त्यो तपाईंको इजाजतपत्रको
लगानीकर्ता पासवर्ड (केवल पढ्नका लागि मात्र): XXXXXX
MT4 एपमा, सेटिङहरूमा क्लिक गर्नुहोस् (तल दायाँ आइकन) > नयाँ खाता > अवस्थित खातासँग लगइन गर्नुहोस्।
खोज बाकसमा (शीर्षमा), लेख्नुहोस्: LegoMarketLCC2-LIVE
प्रयोगकर्ता नाम: लगइन (नम्बरहरू)। तपाईंले तिनीहरूलाई को गृहपृष्ठमा पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ Pantheratrade (MT4 खाता)।
पासवर्ड: लगानीकर्ता पासवर्ड (पढ्न मात्र)। यदि तपाईंले यसलाई हराउनुभएको छ भने, तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको पासवर्ड प्रयास गर्नुहोस् Pantheratrade.
बचत क्लिक गर्नुहोस्
चरण 15 / PantheraTrade
कसरी तपाईंको आय र / वा तपाईंको पूँजी फिर्ता लिने कुनै पनि समयमा ?
तपाईंले चरण2मा उल्लेख गरिएको क्रिप्टोमा मात्र फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले कुनै संकेत गर्नुभएको छ भने USDT क्रिप्टो ठेगाना मा, तपाइँ प्राप्त गर्नुहुनेछ USDT। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि $ 50 भन्दा कम खाताहरूको लागि निकासी न्यूनतम $ 2000 र अधिकतम $ 100.000 प्रति दिन हो। $ 100.000 जम्मा गरिएको (र कमाएको छैन), तपाइँ प्रति दिन पूंजीको 10% निकाल्न सक्नुहुन्छ। 15 देखि 35 $ लेनदेन शुल्क गणना गर्नुहोस् (चाहेको रकम को बावजूद), छनोट गरिएको मुद्रामा निर्भर गर्दछ।
बाट फिर्ता लिनुहोस् PantheraTrade
एक फिर्ता गर्न को लागी, साइट मा फर्कनुहोस् PantheraTradeमा क्लिक गर्नुहोस् लेनदेन> निकासी.
मुद्रा को चयन गर्नुहोस् तपाइँ क्रिप्टो ठेगाना फिल्ड मा दर्ता गर्दा (USDT / LTC वा अन्य), त्यसपछि मान्य गर्नुहोस्।
छवि 1 - अनुरोध गरिएको जानकारी भर्नुहोस्:
स्रोतहरू: तपाइँको MT4 खाता वा तपाइँको छूट खाता चयन गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो आन्तरिक वालेटबाट पनि रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ (प्रायोजकहरूका लागि कमिसन कमाउने).
राशि US $: रकम तपाइँ डलर मा फिर्ता लिन चाहानुहुन्छ
सर्तहरू स्वीकार गर्नुहोस् त्यसपछि मान्य गर्नुहोस्। तपाईंलाई नयाँ पृष्ठमा रिडिरेक्ट गरिनेछ र तपाईंले एकै समयमा OTP कोड सहितको इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ
छवि २ - फिर्ता लिनुहोस् र स्वीकार गर्नुहोस्:
यस पृष्ठको तल, आफ्नो पासवर्ड पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस् PantheraTrade वा कोड (ईमेल OTP) थप्न अब नबिर्सि 2FA। यदि तपाईंले यसलाई प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, यो तपाईंको इमेल (hotmail, yahoo...) बाट आउन सक्छ। Gmail को साथ साइन अप गर्न कुनै समस्या छैन। आवश्यक भएमा, टिकट खोल्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको हालको ठेगानालाई जीमेल ठेगानामा परिवर्तन गर्न सोध्नुहोस्।
त्यसपछि लेनदेन प्रमाणित गर्नुहोस्।
तपाईंले आफ्नो एक्सचेन्जमा निकासीको पैसा जम्मा गर्नको लागि औसत 24 घण्टा (सप्ताहान्त बाहेक) कुर्नुपर्नेछ। यो इन्डोनेसिया र तपाईंको निवासको देश बीचको समयको भिन्नतामा निर्भर गर्दछ।
प्राविधिक सहयोगलाई कसरी सम्पर्क गर्ने Autotrade Gold ?
को प्राविधिक सहयोग पछि 70 जना मध्ये एकलाई सम्पर्क गर्न Pantheratrade, निम्नानुसार अगाडि बढ्नुहोस्: सधैँ आफ्नो सन्देश अंग्रेजी वा इन्डोनेसियालीमा अनुवाद गर्नुहोस् (गुगल अनुवाद तपाईको साथी हो), प्रत्यक्ष र सटीक हुनुहोस्, लेनदेनको प्रमाण प्रदान गर्नुहोस् (txid), दयालु र विनम्र हुनुहोस्। कुनै समस्या भएमा समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, प्रश्नहरू सोध्न होइन। प्रायोजकहरू, सामाजिक सञ्जालहरू र फोरमहरूको यो लक्ष्य छ। धेरै सन्देशहरू नपठाउनुहोस्, यो बेकार छ र समस्याहरू छिटो समाधान गर्न अनुमति दिँदैन, यसको विपरीत।
समर्थन टिकट खोल्नुहोस् PantheraTrade
विषय: तपाईंको समस्या वर्णन गर्न4वा5शब्दहरू
विभाग चयन गर्नुहोस्: खाता समर्थन / वित्त / नेटवर्क
श्रेणी चयन गर्नुहोस्: चयन माथिको क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ।
सन्देश: अंग्रेजी वा इन्डोनेसियालीमा आफ्नो समस्या व्याख्या गर्नुहोस्
छवि लिङ्क: तपाईंलाई व्याख्यात्मक फोटो थप्न अनुमति दिन्छ
आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्।
त्यसपछि 24 घण्टा भित्र जवाफ पठाइनेछ (सप्ताहान्त बाहेक)। धैर्यवान हुनुहोस्।
तपाईं चाहनुहुन्छ प्रायोजक ATG रोबोट बाट PantheraTrade ?
यदि तपाईं पनि साथीहरूलाई सन्दर्भ गर्न चाहनुहुन्छ र तिनीहरूलाई लगभग 15% को मासिक नाफाबाट लाभान्वित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई पृष्ठमा रहेको तपाईंको सन्दर्भ लिङ्क प्रदान गर्नुपर्नेछ। साझेदारी> ड्यासबोर्ड
तपाइँको रेफरलहरु लाई पठाउन को लागी यूआरएल यस्तो देखिन्छ: https: //pantheratrade.live / register /? r = IB ...
को भूमिका साँचो गॉडफादर मार्गदर्शन र आफ्नो भविष्य देवताहरु मध्ये प्रत्येक को सल्लाह, पंजीकरण बाट कमाई को वसूली, बैंक स्थानान्तरण देखि cryptocurrency गर्न को लागी, जोखिम को व्याख्या, प्राविधिक सहयोग मा समय लिईरहेको छ ... काउन्सिल र हुन परोपकार.
प्रायोजक आयोगहरू Autotrade Gold
पुराना प्रयोगकर्ताहरूको लागि लगइन सुझावहरू Pantheratrade
दर्ता भएका लगानीकर्ताहरूको लागि Pantheratrade मार्च 18, 2022 अघि र जो को नयाँ संस्करणमा जडान हुन चाहन्छ Pantheratrade.
पृष्ठमा जानुहोस्: https://live.pantheratrade.tech
तपाईको पुरानो खाताको लगइन इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् PantheraTrade त्यसपछि प्रमाणीकरण बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईले इमेल मार्फत तपाईको प्रयोगकर्ता नाम र तपाईको अस्थायी पासवर्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन यस पृष्ठमा एकीकृत गर्नुपर्नेछ: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ यदि तपाईंले यो इमेल प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
पृष्ठमा जानुहोस्: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
Forgot Password मा क्लिक गर्नुहोस्
आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम लेख्नुहोस्
Pansaka मा प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड बिर्सनुभयो
दर्ता भएका व्यक्तिहरुको लागी AutoTrade Gold सेप्टेम्बर १, २०२१ भन्दा पहिले, तपाइँ ईमेल द्वारा तपाइँको पान्साका लगइन विवरण प्राप्त नहुन सक्छ। यहाँ तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न को लागी एक समाधान छ:
ब्याक अफिसमा जडान: https://pansaka.co.id/panel/login.php
लि on्क मा क्लिक गर्नुहोस्: आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनुभयो?
तपाइँ अर्को पृष्ठमा आउनुहुनेछ।
लि on्क मा क्लिक गर्नुहोस्: प्रयोगकर्ता आईडी बिर्सनुभयो?, त्यसपछि तपाइँको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तपाइँ तपाइँको लगइन आईडी संग एक पहिलो ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो संख्या को एक अनुक्रम हो।
Pansaka लगइन पृष्ठ मा फिर्ता जानुहोस्: https://pansaka.co.id/panel/login.php, त्यसपछि लि on्क मा फेरि क्लिक गर्नुहोस्: तपाइँको पासवर्ड बिर्सनुभयो? तपाइँको जडान पहिचानकर्ता (संख्या) संकेत गरेर।
तपाइँ तपाइँको उपयोगकर्ता नाम र तपाइँको नयाँ पासवर्ड Pansaka मा जडान गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ।
अटोट्रेडका सीईओ, श्री दिनार वाह्यु सेप्टियन डिफ्रिगमा फोकस गर्नुहोस्
दिनार वाह्यु केन्जो इन्डोनेसियामा एक लोकप्रिय सार्वजनिक व्यक्तित्व हो। एक मान्यता प्राप्त लगानीकर्ता, उनी ARTI संघको तर्फबाट IT र नयाँ प्रविधि खण्डको लागि जिम्मेवार भए। (इन्डोनेसियाली व्यापार रोबोट संघ) 1984 देखि इन्डोनेसियामा अवैध व्यापारिक संरचनाहरूको अनुगमन र नेटवर्क मार्केटिङको प्रबन्ध गर्ने संस्था APLI। ठूलो हृदय भएको मानिस, कम्पनीको नाफाको लागि धन्यवाद, कोभिडको अवधिमा खाँचोमा परेका इन्डोनेसियालीहरूलाई १०,००० भन्दा बढी खाना पार्सलहरू वितरण गरिएको थियो। उहाँ Forex को बीचमा, इङ्गल्याण्डमा RBG सीमित कम्पनीको प्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ, र फ्रान्सको लीग 10 बराबरको इन्डोनेसियाली फुटबल टोलीलाई प्रायोजित गर्नुहुन्छ।
दिनार वाह्यु सेप्टियन डिफ्रिग (केन्द्र) सीईओ अटोट्रेड / पानसाका र इन्डोनेसियाको संसदका स्पीकर बाम्बांग सोसात्यो।
भगवान, एक भगवान
प्रत्येक दर्ता रेफरल लिंकबाट बनाईएको हो!
र विश्वास गर्नुहोस्, यसले अब दुख्ने छैन!
यस प्रकारको साहसिक कार्य सुरु गर्न सजिलो छैन जब तपाईंसँग अघिल्लो व्यापार वा क्रिप्टोकरेन्सीको अनुभव छैन। यही कारणले गर्दा म आफैंलाई तपाइँको साथमा अनुमति दिन्छु, तपाइँको बीचमा तपाइँको खाताहरू सेटअप गर्न मद्दत गर्न broker (ब्रोकर) र तपाईंको ट्रेडिंग रोबोट, सान्दर्भिक प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् र प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्नुहोस्। यदि तपाईंले केही रोबोटहरूमा सम्बद्ध लिङ्क फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, यो किनभने म यसलाई उल्लेख गर्न चाहन्न: या त म यसलाई अडिट गर्दैछु, वा म शंकास्पद छु। थप रूपमा, तपाइँ प्राविधिक समर्थन प्रबन्ध गर्न सक्षम हुनुपर्दछ र तपाइँका रेफरलहरू सहि रूपमा साथ दिनु पर्छ, त्यसैले म तपाइँलाई संयम बिना रेफरल लिङ्कहरू दिने जोखिम लिने छैन।
Broker ASIC दर्ता
Ital ठूला मिनेट। ± २ .०
🥇 न्यूनतम। ± 1300$
चाँडै उपलब्ध छ
Pansaka मा पर्खँदै
२०२२ मा उपलब्ध छ
पूंजी न्यूनतम। ± €50
ठूला मिनेट ± २००
के तपाइँ कुनै जानकारी छुटेको छ?
💬 टेलीग्राममा मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् ताकि म तपाईंलाई सल्लाह दिन सक्छु र मेरो मद्दत गर्न सक्छु।
वेबमा विदेशी मुद्रा घोटालाहरूका लागि बाहिर हेर्नुहोस्
एएमएफ द्वारा जारी अनधिकृत कम्पनीहरू र साइटहरूको कालोसूची पत्ता लगाउनुहोस्। हाम्रो कुनै पनि रोबोट होईन brokerसमावेश छैन।
विगतको प्रदर्शन भविष्यको प्रदर्शनको कुनै ग्यारेन्टी छैन।
उच्च जोखिम बिना उच्च प्रदर्शन छैन। शेयर बजारमा, विगतको प्रदर्शन आफैंमा आवश्यक छैन।
यस साइटमा कुनै लगानी सल्लाह छैन
ट्रेडिङले तपाईंलाई निक्षेपको बराबर हानिको जोखिममा पर्दाफास गर्छ र यो जोखिम वहन गर्ने वित्तीय साधन भएका राम्ररी जानकार ग्राहकहरूका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ। विगतको नतिजा भविष्यको नतिजाको सूचक होइन। आगन्तुक प्राप्त जानकारीको प्रयोगको लागि पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ र यस प्रयोगसँग सम्बन्धित सबै जोखिमहरू मान्दछ। विशेष गरी, यो आगन्तुक आफ्नो राजधानी को अखण्डता जोगाउन सबै आवश्यक उपायहरू लिन निर्भर छ। Robots-trading.fr, cryptonithe.com वा mon-conseiller-crypto.fr र यसको प्रशासकहरू कुनै सम्भावित घाटाका लागि जिम्मेवार हुनेछैनन्।
हाम्रो पढ्नुहोस् सेवाका सर्तहरु र हाम्रो पारदर्शिता बडापत्र.